AKHRISO: Garabka Cabdi Xaashi ee Somaliland oo walaac muujiyey “RW Dhexdhexaad maaha”
July 17, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Garabka Siyaasiinta kasoo jeeda Somaliland ee dhinaca Cabdi Xaashi gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa soo saaray qoraal ay uga hadlayaan arrimaha doorashooyinka ee socda, oo ay kaga hadlayaan geedi socodka doorashada oo ay saluug ka muujinayaan.
Sida ku cad qoraalkan, waxaa lagu sheegay in Raysalwasaaraha Soomaaliya Eng, Maxamed Xuseen Rooble diiday in uu dhexdhexaad ka ahaado 3da xubnood ee uu soo magacaabayo in ay noqdaan kuwa aan taabacsaneyn dhanka kasoo horjeeda ee uu hogaaminayo Raysalwasaare kuxigeenka Mahdi Guuleed.
Qoraalka, waxaa kaloo lagu cadeeyey in ay ka xun yihiin in la dhageysan waayay talooyinka iyo tabasho ay soo jeediyeen, taas bedelkeedana ay hadda dareemayaan in Xukuumaddu go’aansatay in ay dhaqaajiso tareenka doorashada, iyadoo aqbashay Is doorashadii xubanha guddiga.
Cabdi Xaashi iyo kooxdiisa ayaa muujiyey in ay doonayeen in doorashada ay galaan 8 xubnood ee ay soo kala magacaabeen labada garab oo u kala safan 4 iyo 4, aysana jirin cid kale oo dhexda uga jirta, ayna doonayaan in 3da xubnood ee Raysalwasaaraha laga saaro doorashada, laakiin taas ay diideen xubnaha guddiga oo sheegay in Habraaca doorashada ee lasaxiixay 27kii May uu dhigayay in wadajir 11 xubnood u doortaan gudoonka.
Warar hoose ayaa sheegaya in Raysalwasaare Rooble ka diiday xubnahan in loo xiro kuraastooda, taas bedelkeedana uu u soo jeediyey in ay garaan tartan furan oo ay dhammaan u siman yihiin Muwaadiniinta wada leh kursiga, taas oo uu ka sheegay shirkii uu dhawaan la yeeshay labada garab ee Siyaasiintan.
Soomaalida qarannimo dhab ah ujeeddadeedu ma aha oo maanka iyo qalbigana kaga ma qufulna. Qaran iyo dawladba waa uun shacabka ee wax kale ma aha.
Waan kucelcelinayaa: Soomaalidu waxay noqotay dawacadii raadkeedii ka ambatay oo libaaxa raadkiisana gaari kari wayday. Hannaan iyada katarjumaya way yeelaalan wayday, kuwii qalaadna way gaari kari la’dahay oo sidii loobaahnaa ugu ma dhaqmayso.
Xamar qarandoonnimo laga daacad yahay baadigoob loogumajiro ee, isla loollankii sedbursiga qabaliga ee markii hore qoriga la isugu adeegsanayay ayaa hadda qaab kale la isugu adeegsanayaa – waana lacagta qalaad.
Waxaa rajo iyo waanwaan lagaqabi lahaa dalka oo markahore loodhisay hannaan sugan oo qarannimo iyo dawladnimo dhab ah lagu dulqotomiyay, aan shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa dastuuriga ah sina looweecsan karin waxkastoo dhaca. Macal asaf, haatan meeshu waa fagaare cad-quureed la iskaga ciideynayo.
Waxaan xaaladdan ay Soomaalidu kusugantahay kasooqaadaa warmooleey goob dagaal colaad ugu kuluntay oo haddana lagafilayo inay aqal ay wada dugsato wada dhisato.